Supertuxkart 1.2 inosvika neyakagadziridzwa rutsigiro rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Supertuxkart 1.2 Inouya neakagadziridzwa Mutyairi Tsigiro, Nyowani "Cartoon" theme, uye Zvimwe Zvitsva Zvitsva
Mushure memwedzi inopfuura minomwe yekusimudzira iyo yakatanga mushure meiyo v1.1 kuburitswa, Mutambo weMwedzi uye nechikwata chayo chevagadziri vakazvimiririra vakave nemufaro we zivisa kuvhurwa kwe Super Tux Kart 1.2. Iyo itsva yakagadzika vhezheni iyo inosanganisira yakawandisa runyorwa rwezvinhu zvitsva, asi pane imwe yadzo inogona kumira kune vese mafeni erudzi urwu rwemhando yeiyo SuperMario Kart iyo yakave yakakurumbira kwazvo muNintendo nyika.
Nepo vazhinji venyu vangangowirirana nekhibhodi pavanotamba pakombuta, vamwe vashandisi vanofarira kutamba nevatungamiriri. Nechikonzero ichocho chete, kwatiri SuperTuxKart 1.2 inoitwa yakakosha, nekuti yakavandudza rutsigiro rwemitambo yemitambo Pazasi iwe une iyo rondedzero yezvakakurumbira zvitsva izvo zvauya pamwechete pamwe neshanduro nyowani yemutambo wemotokari unonzwira tsitsi inowanikwa yeLinux.
1 Zvinoratidza zve SuperTuxKart 1.2
2 Iye zvino inowanikwa kubva kune anovandudza webhusaiti
Zvinoratidza zve SuperTuxKart 1.2
Yakanyanya kuvandudzwa rutsigiro rwevatongi (mapaipi emitambo) kana uchishandisa SDL2 panzvimbo yeIrrlich yekugadzira windows. Nezve izvi, izvozvi inotsigira "hotplugging" yevatyairi, mazhinji eetsikidzi ane chekuita neanodzora akagadziriswa uye ikozvino mepu yave nyore.
Zvirongwa zvitsva zvekugadzirisa iyo kamera kamera.
Mutsva "Cartoon" theme, inova nyowani yazvino theme yakaziviswa kare. Iyi tema inoratidza mamwe maekoni.
Yakagadziridzwa online online system. Masosi epamhepo akaiswazve kuitira kuti ugare uinewe.
Iye zvino unogona kudzora hwindo remutambo mairi usingaende pane zvasarudzo.
Iyo minimap ikozvino inoratidza basketballs.
Chero yekuwedzera-kart kart ikozvino inogona kushandiswa online kunyangwe vamwe vatambi vasina iyo.
Matatu akakwidziridzwa makarati: nyowani Kiki kart uye yakagadziridzwa Pidgin uye Puffy karts.
Wakawedzera rutsigiro rweLAN IPv6 maseva.
Yakawedzera kumhanya uye kuita kwe server kugadzira.
Mu-mutambo kugadzirwa kweiyo inomhanyisa server iko zvino inogoneka pane iOS zvishandiso.
Yakagadziridzwa dzidziso neyemahara-kuyerera kumhanya.
Tsigiro yeSVG mifananidzo.
Matipi matsva ebhora renhabvu.
Chikwata chechikwata chemitambo yetimu.
Mazhinji madiki magadziriso madiki uye magadzirirwo avasinga taure nekuti haakwanise muchinyorwa chimwe chete, asi vanoti ivo vanowedzera.
Yese nzira dzepamutemo dzakabatanidzwa mukuburitswa uku.
Kugona kushandisa tsika yekutsvaira skrini pakutanga uye chiratidzo chiri nani chemberi panguva yekuburitsa dhata mushure mekurodha pasi.
Iye zvino inowanikwa kubva kune anovandudza webhusaiti
Panguva yekunyora uku, SuperTuxKart 1.2 ikozvino iripo kubva ku yekuvandudza webhusaiti yeLinux, Windows uye macOS, asi mune zvese zviitiko tichafanira kurodha zviripo kubva ipapo. Ini ndinotaura izvi nekuti muLinux tinogona kuiisa kubva kumahofisi epamutemo mazhinji ekuparadzirwa kweLinux, kubva kuFlathub (Flatpak) uye Snapcraft (Snap), asi hapana chimwe chezvinhu izvi chakagadziridzwa panguva yekunyora. Ehe, isu tinokwanisa kurodha pasi tarball uye nekodhi yekodhi.
Kana ari Android vhezheni, chinongedzo Zvinotitorera kuGoogle Play yepamutemo, asi izvo zvatinogona kurodha pasi manje ndiyo yekutanga RC yeSuperTuxKart v1.2, zvinoreva kuti haina kugadziridzwa futi. Kune imwezve beta vhezheni yakagadziridzwa muna Nyamavhuvhu 18, asi havataure kuti inotakura manhamba api
Chero zvazvingaitika, kana pfungwa ye isa iyo "tarball" uye unofarira kumirira, imwe yesarudzo dzakanakisa, nekuti mashandiro ayo uye nekuvandudzwa kwayo, ingangove yekuisa iyo v1.1 chii chiri paFlathub, saka iyo yekumirira ichave iri nyaya yemaawa. Kune rimwe divi, kana iwe uri mafeni eUbuntu kana iyo kambani inosimudzira iyo, Canonical, tinoziva kuti iyo Snap vhezheni ichagadziridzwa zvakare, asi ini ndinokusiira iwe uine data rinoparadza: v1.1, kubva muna Ndira, akauya kuSpapcraft musi waChikunguru 7, wasvika muna Ndira 5 paFlathub.
Chero zvazvingaitika, isu tatova neshanduro nyowani yeSuperTuxKart. Ngatizvifarire.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Supertuxkart 1.2 Inouya neakagadziridzwa Mutyairi Tsigiro, Nyowani "Cartoon" theme, uye Zvimwe Zvitsva Zvitsva
WINE 5.16 inosvitsa AVX x86 kutema matanda rutsigiro uye inoenderera nekugadzirisa zvakare kutsigira koni
Apple yaizosiya Google yobva yagadzira yayo yekutsvaga injini